जोर्डनमा नेपाली महिलामाथि त्यस्तो हर्कत, टेलिफोनमा रुँदै भनिन्– औषधि समेत पाइन, बचाउ सरकार ! (भिडियोसहित) « Janata Samachar
जोर्डनमा नेपाली महिलाको दर्दनाक अवस्था, रेडक्रसमा भद्रगोल, एनसेल कर छलीबारे डा. युवराज संग्रौलाको तर्क
प्रकाशित मिति : 20 February, 2020 4:40 am
मदन खाती/ ऋषि खतिवडा/ सन्तोष गिरी
काठमाडौं । केही दशर्कयता महिला राेजगारीका लागि विदेशिने क्रम बढेको छ। रोजगारीको शिलशिलामा महिला मलेशिया, दुबई, इजरायल, कुवेत र जोर्डन लगायतका मुलुकसम्म पुग्ने गरेका छन् ।
सरकारले महिलालाई घरेलु कामदारको रुपमा विदेश जान २०५९ सालदेखि प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर महिला लुकिछिपी भारत हुँदै घरेलु कामदारकै रुपमा विदेश पुग्ने गरेका छन् । केही महिना विभिन्न बहाना बनाएर नेपालबाटै जाने गरेका छन् । घरेलु कामदारको रुपमा विदेशिएका महिला अधिकांशको अवस्था दयनीय छ ।
जोर्डनमा नेपाली महिलाको अवस्था झन् पीडादायी छ । मकवानपुरकी पूजा राना जोर्डनमा नेपाली महिलाको स्थिति दर्दनाक रहेको खुलासा गरेकी छन् । उनले आफू समेत मालिकबाट प्रताडित भएको भन्दै उद्दारका लागि नेपाल सरकारसँग अपील गरेकी छन् ।
उनले अहिले आफू बिरामी रहेको र मालिकले औषधी समेत नदिएको बताएकी छन् । उता, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीभित्रको विवाद संसदीय समितिमा प्रवेश गरेको छ । एनसेल कर विवाद बारे पूर्व महान्यायधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले लुकेका केही तथ्यको उजागर गर्नुभएको छ ।
काठमाडौं । सरकारले सुन पैठारी घटाएको छ । सुनको भाउ निरन्तर उकालो लागिरहेको बेला पैठारी
अब खाद्यान्न किन्दा १० प्रतिशत छुट पाइने
काठमाडौं । खाद्यान्न किन्दा अब १० प्रतिशत छुट पाइने भएको छ । सरकारले उपभोक्तालाई खाद्यान्नमा